Maxay nimanka u joojiyaan haweenka uurka leh?
Su'aal: "Maxay ragga uurka ka bixiyaan?" Dhammaan dumarka, haweenka, dumarka, tuura inta lagu guda jiro uurka, ayaa la waydiiyaa, laakiin dhab ahaantii, xitaa xitaa uurka lafteeda, laakiin sababaha isku midka ah ee looga tago xaaladaha caadiga ah.
Si aan u bilowno, waxaan kuu sharxi doonaa.
Ugu horreyntii, sababta ugu weyn waxay noqon kartaa in aad uun uun noqotid mid aad u xiiso u leh ninkaaga. Maadaama haweeneydani aysan dib dambe u noqon karin mid xiiso leh lab ama dheddig, iyo wada hadal toos ah. Raggu marwalba waxay isku dayaan inay helaan waqti, ma ahan habboon, ugu yaraan haweeney, oo ay ku faraxsan tahay inay hadasho iyo, shaki la'aan, si fiican sariirta. Taasi waa, haddii nin yahay caqli, markaa inta badan wuxuu u baahan yahay gabadh ku filan.
Intaa waxaa dheer, waxaa habboon in la xusuusiyo in haweeneydu aysan marnaba xaq u laheyn inay muujiso in ay ka fiicantahay ninkeeda, laakiin xataa sidaa daraadeed, ma aha inay nacas noqoto. Waa inay noqotaa actress, oo wax u qabataa nin, oo aad u raadin lahayd sida uu rabo inaad noqoto.
Intaa waxaa dheer, jinsi ahaan waa in aanad adkaan, waxaa hubaal ah in uu ku caajiso isaga, oo wuxuu u socon doonaa socodka dhinaca bidix, inkastoo, dabcan, ha dhaafin, sababtoo ah wuxuu u maleynayaa in aad leedahay rag badan. Iyo, sida caadiga ah, ma noqon karaan dumar leh ragga badan oo ka hor.
Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira waxyaabo ay ka mid yihiin kuwa aan is-waafaqsaneyn jilayaasha.
Xaqiiqdii, haddii aad ka fiirsato dibadda, waxaad naftaada u diyaarin kartaa wax walba, laakiin haddii aad si joogto ah u fadeexadiso, oo aadan kalsooni ku qabin, si kastaba ha ahaatee, ha u tagin nasiib daro, markaa dhamaadka dhamaantiisuna waxay u eg tahay waad qaybsan doontaa. Dumarka, faham in nin uu dabiici yahay hogaamiye, wuxuuna mar walba ku adkeysanayaa xaalad kasta oo isku dhac ah, iyo haddii uu dhab ahaantii kuu jecel yahay - u dhiib isaga, laakiin haddii aysan jirin, markaa wax jawaab ah ma jiri doonto.
U diyaari dareenkaaga, waxa aad u fududahay nin inuu kuugu helo bedelaad oo aanu filaynin in nin diyaar u yahay wax kasta, 95% kiisas sidan oo kale ah.
Intaa waxaa dheer, haweeney kasta waa inay awood u yeelato inay is-xukunto. Ma jiro nin raba inuu la noolaado haween aan la saadaalin Karin, taas oo maanta ah mid ka mid ah, beri dambe oo wax badan samayn kara waxyaabo nacas ah. Waa inaad isha ku haysaa oo aad si fiican ugu dhaqantaa goobaha dadweynaha.
Oo sidii hore ayaa loo yidhi, rag ma lihi waaye. Yaa horay u lahaa rag badan, xitaa haddii uu ahaa dhalinyaro. Hase yeeshee, hab nololeedku maaha mid wanaagsan, sababtoo ah nin ayaa ugu dambeyntii ogaan karaa iyada oo aan ku haboonayn taariikhda ugu wanaagsan, sidaas awgeed, ragga ragga ahi ma rabaan inay nolosheeda ku noqdaan 39aad. Iyo xataa intaas ka sii badan, haddii ay la xiriirtay asxaabtiisa, xitaa ka hor saaxiibkiina.
Sidoo kale, waxaa habboon in la ogaado in aadan isticmaalin nin sida rukunka ah. Maya, ma aha. Waxaad ka hadli kartaa dhibaatooyinka, laakiin ha ka badin. Waa inaad dareentaa naftaada waxa qiimo leh inaad u sheegto. Iyo waxa aan ahayn. Waxaa fiican in tani ay u isticmaasho saaxiibkaa, maxaa yeelay waxay ka dhegeysan kartaa si buuxda si loo xoojiyo oo xitaa uga raaxaysto. Raggu waxay rabaan degaan degan, degan, haween leh, oo aysan xiiseyneynin waxa aad iibsatay, intee in le'eg iyo wixii la mid ah. Ma ahan saaxiibkaa!
Waxa kale oo ay mudan tahay in la ogaado in dumarku ay badanaa joojiyaan daryeelladooda, iyaga oo rumaysan in meel ka mid ah arrintani aanay jirin. Tani waa wax micno lahayn! Raggu mar walba waxay qiimeeyaan hablaha cusub. Shalay waxaad aheyd mid aad u qurux badan, maanta ma ahan mid aad u wanaagsan, adiga iyo dabeecaduna waxay noqon doontaa mid u dhigma. Wax walba si joogto ah ayaa isbedelaya. Waa inaad si joogto ah u beddesho fadlan oo aad la yaabto dhadhankaaga nin. Iska ilaali naftaada! Tani waa asaasi! Kadib markaad uurka leedahay, sida caadada ah, haweenku waxay u egyihiin jilicsanaanta, iyo barbaarinta ilmaha waxayna ku noqotaa mid wax ku ool ah dharkooda, iyo mid aad u badan oo su'aasha ah sababta ay raggu u soo tuuraan haweenka uurka leh? "Waxaa ku jira si sax ah cutubkan.
Intaa waxaa dheer, ha ilaawin in nin aanu ahayn boorso. Haa, ragga oo dhan waxay ku raaxaystaan ​​haweeynta dumarka, waxay hubinayaan inay si farxad leh kuugu raacaan makhaayad, iibsadaan ubax, waxyaalo qaali ah, laakiin markaa, dabcan, waxay rabaan galmo iyo jacayl, waa jacayl, sababtoo ah waxay u baahan yihiin inay dareemaan sida jinsi loo iibsan karo lacag.
Badanaa haweenku waxay lacag ka qaataan raga si ay u siiyaan galmo galmo oo keliya. Xaaladahaas oo kale, waxay joojiyaan jacaylkaaga. Sidaas daraadeed, waxaad lumisaa wax kasta.
Gabagabada ayaa muujinaysa lafteeda. Adeer si aad ujoogsatid, waxaad rabtaa inaad garaacdid, jacayl iyo haddii aad wax rabto, samayso talooyin.
Qalad kale ayaa ah in ninku naftiisa dareemo marka uu rabo inuu ku guursado, laakiin markii lagu qasbay inuu sidaan sameeyo, ma uusan ku faraxsanayn, oo aad ka cabsan kartid.
Sidoo kale, naag kasta waa inay ogaadaan in nimanku ay wax u dhaafi karaan wax kasta oo khiyaano ah. Haddii wax aysan ku farxin. U sheeg si toos ah, oo ha u horseedin fadeexado.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qodob kale, waa mid aad u xiiso badan, iyo inuu noqdo mid sax ah, halkan waxa ah.
Waxay dhacdaa in xaasku bilawdo inuu ka badan yahay ninkeeda, tan iyo markii ugu horreysay ee nin loo aqoonsado inuu yahay qof ganacsade ah, waa adag tahay in la helo nin ku faraxsan. Haddii aynnu sidoo kale bilaabi karno ragga raggeenna ah in aanu ka fiicnayn wax kasbashada iyo wixii la mid ah, ka dibna aynaan malayn karayn fasaxa, waxay noqon doontaa 100%.
Ugu dambeyntiina waxaad kaligaa ahaataa, taas oo ah mid aad u murugeysan, midkeenna midna uma baahnin.
Sidaa daraadeed, gabdhihii quruxda badani waa inaysan ku dhaleeceynin nimankaada si ay u fiicnaadaan, si aanay u dhisin kakanaan la'aan.
Haddii ay dhacdo in aad uur leedahay, iyo xeerarka habdhaqanka ee kor ku xusan looma kulmin, ninku wuxuu bilaabay inuu is weydiiyo su'aalihiisa: "Miyaan u baahanahay tan? Miyaan samayn karaa? Laakiin haddii aan si fiican loo daaweynin, wax walbaa wuu sii xumaanayaa. " Iyo wixii la mid ah. Sidaa daraadeed, marka ugu dambeysa, mid waa mid kale oo sareeya lakabka weyn, iyo dhammaan 9-kii bilood ee uurkaaga, waxay qaadataa shaki la'aan iyo niyad-jebis, natiijadaasna, si fudud ayaad uga tagaysaa haweeneyda caajiska ah ee aan u baahnayn, iyo haddii shaki la'aan oo ku saabsan cabsida aabaha xun aabahaaga, mararka qaar xitaa ka tago magaalada iyo xitaa waddanka, hadafka mar walbaa mar walbaa laguma kulmo oo aad aragto ilmahaaga, oo mar kale ka bilawdo, iyo helitaanka haweeney cusub oo uu ku kasbado kalsooni. Waxaan rajeynayaa in maqaalkani kaa caawin doono inaad ka jawaabto su'aasha ah sababta nin u tuuri karo haween uur leh? "
Arooska Turquoise: Xisbi ee midabada badda
Xulashada salaanta iyo salaanta ugu fiican ee sannad-guuradii arooska
Aqoonta waalidiinta aroosadda iyo arooska: caadooyinka
Waa maxay riyadu, ee aan ka lumay giraanta, balan qaad?
Ksenia Sobchak ayaa ka wada hadashay uurkeeda Twitter
Burrito digaag iyo basbaas
Sigaar cabid iyo naas nuujin
Jinsiga koowaad ka dib markaad isniinta
Sidee ugu fiican ee loo abaabulo shaqooyinka guriga?
Kulammada galmada iyo ku qanacsanaanta galmada
Daryeelka jidhka ee guriga
Hababka miisaanka ee laf dhabarta
Antibiyootiko ee qiyaasta tallaabada saddexaad
Kufsi la'aan: cadaadiska maskaxda
Qalabka daaweynta dhirta
Maxaa saameeya da'da lumitaanka bikradnimada?
Mu'miniintu waxay ku sameeyaan Easter: caadooyinka iyo dhaqamada Maalinta Wayn